5 ọdọ mmiri ndị dị na Spain zuru oke iji jụọ oyi n'oge ọkọchị | Akụkọ Njem
Oge ezumike amalitebeghị n'oge ọchịchị mana okpomọkụ na mpaghara ụfọdụ nke Spain amalitela ịkwụsị. Iji lụso ya ọgụ, ihe kachasị mma bụ ịgbanye ntụ oyi n'ụlọ ma ọ bụ gaa nọrọ ehihie n'ụlọ ahịa. Mana ọ bụrụ na ịchọghị ịhapụ otu ụbọchị n'èzí, na post na-esonụ anyị ga-ekwu maka ọdọ mmiri ọdọ mmiri 5 dị na Spain nke zuru oke maka itinye.
1 Akpịrị nke Hel
2 Osimiri Ruidera
3 Charcones nke Lanzarote
4 Las Chorreras na Cuenca
5 Gulpiyuri osimiri
Akpịrị nke Hel
Anyị nwere ike iche na ebe a na-akpọ Hells Throat bụ akụkụ akọrọ nke na-ata ahụhụ na oke okpomọkụ n'ime afọ na ebe ndụ siri ike ịzụlite. Agbanyeghị, ogige a dị na ndagwurugwu Jerte, mpaghara Cáceres, bụ nke ọzọ.
Ọ bụ ebe echekwara n'okpuru akara nke Natural Reserve, nke na-eche maka oghere ndị, n'ihi ọdịiche ha ma ọ bụ mkpa ha, kwesịrị nchebe na ekele pụrụ iche. .B.Ndị ọzọ nwere otu n'ime ọdọ mmiri a maara nke ọma na ndagwurugwu Jerte, nke nwere ọdọ mmiri iri na atọ na-enye ume ọhụrụ bụ ndị mmiri mmiri na-emebi na nkume granite.
Typesdị ihe omume ndị ọzọ enwere ike ime na Garganta de los Infierno bụ ụzọ 4 × 4, njegharị na-eduzi, njem foto, njem njem ma ọ bụ ikiri nnụnụ.
Ihe mbu nke dọtara uche gị mgbe ị na-eche echiche banyere Ruidera Lagoons bụ na ọ dị ka olulu n'etiti Campo de Montiel. Ala nke Ogige Ntụrụndụ a bụ otu n'ime ihe kachasị mma na Castilla-La Mancha na ihe ngosi okike nke na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị.
Okpokoro ala akọrọ nke obodo a kwụ ọtọ na-efu n'etiti ọdọ mmiri iri na isii nke iyi na iyi mmiri jikọtara. Ogige Ntụrụndụ Ruidera Lagoons bụ Plividje dị na Kroeshia, nke kacha mma anọchite anya ọdọ mmiri nke mkpokọta calcium carbonate guzobere. N'oge ọkọchị, a na-enyere mpaghara ahụ aka igwu mmiri na maka ime ihe n'èzí dị ka ịgagharị, ịkwọ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịgagharị.
Were ohere gbalịa ịhụ akwụkwọ Cueva de Montesinos, Castle nke Peñarroya, Castle nke Rochafrida ma ọ bụ gbalịa njem nlegharị na ụkwụ ma ọ bụ na pìragua.
Charcones nke Lanzarote
Foto | Lanzarote 3
N'ebe dị anya n'akụkụ osimiri ndị dị egwu nke Canary Island bụ ọdọ mmiri ndị dị na Los Charcones de Lanzarote, otu n'ime akụkụ kachasị nzuzo nke ya ndịda ọdịda anyanwụ.
Ọdọ mmiri ndị a bụ ogige udo nke na-erite uru site na ihu igwe dị jụụ ma nwee mmiri turquoise. Oghere zuru oke iji kwusi ma nwee obi uto.
Oké osimiri na-eme ka mmiri dị na Charcones de Lanzarote na-agbanwe mgbe niile mana ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịkpachara anya mgbe ị na-asa ahụ n'ihi na mmiri mmiri ahụ dị aghụghọ. Enwere ọdọ mmiri miri emi nke na-eme ka onye kacha nwee obi ike ịga ebe dị elu na ndị ọzọ na-emighị emi nke na-anabata ịsa ahụ dị jụụ. Ọzọkwa, ụfọdụ dị mfe ịnweta karịa ndị ọzọ yabụ dabere na mmasị na atụmatụ anyị, anyị nwere ike ịhọrọ nke ga-adịrị anyị mma.
Las Chorreras na Cuenca
Dị ka aha ya na-egosi, Chorreras na-ezo aka n'ụgbọ mmiri nke a pụrụ ịhụ n'akụkụ Osimiri Cabriel, jiri obere ma ọ bụ karịa, maka kilomita 1,5. Ebe a dị n’obodo Enguidanos, ihe karịrị otu awa si Cuenca na otu awa na ọkara si Albacete.
N'oge njem na Chorreras de Cuenca site na akwa mmiri dị warara, anyị ga-enwe ike ịtụgharị uche n'ihe ndị mara mma e kere eke nke mbuze mmiri mepụtara yana rapids na nsụda mmiri nke yiri ka ewepụtara site n'akụkọ ifo. N'ikpeazụ, ọ na-ejedebe na obere osimiri osimiri, na nsọtụ nnukwu ọdọ mmiri, ebe mmiri dị ezigbo mma ma na-akpọ gị òkù ka ị banye.
Agbanyeghị, igwu mmiri abụghị naanị ihe enwere ike ịme na Chorreras de Cuenca ebe ụfọdụ ndị ọbịa na-eji ohere okwute eme ihe iji gaa rafting ma ọ bụ nwee ike ilegharị anya na nsụda mmiri.
The osimiri nke Gulpiyuri
Foto | Otu Europe
Osimiri kasị nta n'ụwa dị n'ụsọ oké osimiri Asturian, n'etiti Llanes na Ribadesella. Ọ naghị eru mita 50 n'ogologo mana ọ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ oke osimiri ma lụso ọgụ ike oge okpomọkụ dị ka nke kachasị mma.
Ekwuputara ihe ncheta nke oma, emebere Gulpiyuri site na nsogbu mbu nke oke osimiri n'elu oke ohia, na emeputa uzo di n'okpuru ala nke mgbe ana-akpo ha, a na-akpo ha mmiri mmiri. Osimiri Asturian a bụ kpọmkwem nke ahụ, olulu mmiri nke mmiri mmiri na-asọba n'ime ime maka oghere dị n'etiti nkume abụọ nke nwere ọdịdị nke ọdọ mmiri nnu.
Ọ bụ ebe kachasị amasị maka ọtụtụ ezinụlọ sitere na Ọwụwa Anyanwụ n'oge ọkọchị maka ebe obibi na ịdị jụụ ya n'ihu ebili mmiri siri ike nke Osimiri Cantabrian.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » 5 ọdọ mmiri ndị dị na Spain zuru oke iji jụọ oyi n'oge ọkọchị